Tenga Thailand Teak Natural Wood Tableware Spoon Set - Mahara Kutumira & Hapana Mutero | WoopShop®
Thailand Teak Natural Matanda Tableware Spoon Set
Type: Kumba & Kitchen
ruvara Bhokisi C Bhokisi B 10pcs kukwira kumusoro 07 08 05 Bhokisi A 06 03 04 01 02
Bhokisi C Bhokisi B 10pcs kukwira kumusoro 07 08 05 Bhokisi A 06 03 04 01 02
Thailand Teak Natural Wood Tafura Spoon Set - Bhokisi C yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
advertising: CE / EU
Nhamba yezvikamu: 7
zvishandiso zvekicheni: Kchenjerai
Zvokushandisa zvekubika: matanda ekicheni machini
Nonstick kicheni: Kicheni Kubika Utensil
Name: Kusanganisa Spoon Pizza Shovel
Kukura: Sezvinoratidza mufananidzo
Ruvara: Wood Colour
Yakagadzirwa neakasikwa matanda zvinhu, akareruka, eco-ane hushamwari uye hapana ngura, hutano kushandisa.
Yakanaka chimiro dhizaina rakareba rinotaridzika chaizvo rakapfava, nyore kubata.
Yakachengeteka kushandisa pane inopisa nzvimbo uye yakachengeteka kune akasiyana siyana ekubikira nzvimbo.
7 Mafashoni Fancy imba yekicheni matimu ekushandisa iwe neshamwari dzako.
Zviri nyore kutarisira - geza nemaoko nesipo yakapfava kana mvura, kuchengetedza munzvimbo yakaoma.
Zve: imba, imba yekutandarira, uye kicheni
Package inosanganisirwa: 1 x Wooden Spoon
Cherechedza: Nekuda kwechiedza uye musiyano wescreen, ruvara rwechinhu rwunogona kunge rwakatosiyana nemifananidzo. Ndokumbirawo ubvumidze misiyano 1-2 cm nekuda kwekuyerwa kwechinyorwa.
Maboon acho akanaka, akanyatsogadzirwa, akatsetseka, akanaka kubata mumaoko ako. Kubika navo kunonakidza!
yakagamuchira set uye imwe supuni yakatsemurwa nepakati, zviri pachena kuti iyo yakatotyorwa yaive yekutanga kurongedzwa.
ХХ, оХ Х,, оХ ро, Ри х,,,,,,,,